Akwụkwọ Ọkachamara na Transgenderism | KPỌỌ
Ndị nyere onyinye: -
Prọfesọ Dianna Kenny.
Ndị ọrụ Victoria machibidoro igbochi usoro nyocha ndị ọzọ na ụmụaka. - Prọfesọ John Whitehall
B G Ọ B GRENDER ENDERBOCRENDER NSỌ NA D GSPHORIA - PATARA Dianna Kenny
Ihe dị mkpa na mkpebi ikpere maka ọgwụgwọ mgbanwe agbụrụ: Ajụjụ & Azịza. - Prọfesọ Dianna Kenny
N'isiokwu a, m na-eleba anya na isi okwu na arụmụka transgender dịka ha gbasara ụmụaka na ndị na-eto eto. Ndị a gụnyere: "Usoro ọgwụgwọ mgbanwe ọnọdụ nwoke na nwanyị" adịghị mma, "ọgwụgwọ" yana ọdịmma kacha mma nke nwatakịrị ahụ? N'ịtụle ajụjụ ndị a, m na-enyocha nsonaazụ ọjọọ ndị a ma ama nke njakịrị ime nwoke na nwanyị homonụ na nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ, gụnyere amụghị nwa na ọnọdụ ahụike ndị ọzọ na ịkọwa ọnụ ọgụgụ igbu onwe onye na-enweghị ọgwụgwọ.
Ntinye ihe egwuregwu ndi nwanyi na nkwuputa nwoke na nwanyi: colọ nkuzi maka usoro ahụike. - Prọfesọ Dianna Kenny
N'afọ 2009, onye na-eme egwuregwu South Africa bụ Caster Semenya meriri, site na ihe dịka mita 20 site na onye na-ama ya aka, ihe omume 800m nke ndị asọmpi egwuregwu ụwa. Mmeri ya adịteghị aka. Esemokwu bilitere na Semenya bụ “nwoke n'ezie.” Nwa nwoke ahụ dị afọ 18 si n'obodo nta dara ogbenye na Osimiri Limpopo dị na South Africa ghọrọ isi okwu mkpu arịrị nke mgbasa ozi nke mba ụwa gụnyere gụnyere mwepụta nke ọgwụ gbasara onwe ya n'enweghị nkwenye.
Dika osiri di, okwu transgender / transsexual na-ezo aka na onye merela ihe di iche iche iji gosiputa onwe ha na ndi mmadu dika ndi ozo, na mwepu nke nwoke na nwanyi ndi nwoke na ndi nwanyi. O nweghi onye amụrụ transgender ma ọ bụ transsexual na onweghị onye sayensị sayensị siri ike nke kwuru ụdịrị okwu a. Onweghi ike amumanu n’ime aru “ezighi ezi” (“ụbụrụ nwa nwoke” n’arụ nwanyị dịka ọmụmaatụ).
Mmekọ nwoke na nwanyị - Dr. Paul McHugh
Mara nke Editọ: Ajụjụ ndị metụtara mmekọahụ na okike na-emetụta ụfọdụ akụkụ mmekọrịta chiri anya na nke ndụ mmadụ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ha akpasuwo ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị America iwe. Anyị na-enye akụkọ a - nke Dr. Lawrence S. Mayer dere, onye ọrịa ọrịa na-ahụ maka ọrịa isi, yana Dr. Paul R. McHugh, na-ekwu na ọ bụ ndị isi ala America kachasị mkpa na ọkara narị afọ gara aga.
Ezinaụlọ mbu - New Zealand. Dọ aka na ntị gbasara paediatric nye New Zealand - Ọkachamara John Whitehall
Ọrịa nke 'dysphoria okike nwata' na-egbu Ọdịda Anyanwụ .wa. Site na ụkọ site na ụkọ ihe na-erughi afọ iri gara aga, enwere mmụba n'ọnụ ọgụgụ ugbu a n'ọnụ ọgụgụ ụmụaka ana-ebunye ya na ụlọ ọgwụ ụmụaka kachasị arụ na mkpesa 'a mụrụ ha na ahụ adịghị mma' ..
Arịrịọ maka nyocha ndị omebe iwu na ntughari nke Ahụike Ọrịa na Ahụike nke withmụaka na Dysphoria Gender - Ọkachamara John Whitehall
Ana m ede, ị kelee gị maka nchegbu gị banyere ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ụmụaka Australia na-akọ na-ata ahụhụ site na dysphoria okike na igosipụta nchegbu m na enweghị ntọala sayensị maka ọgwụgwọ ahụike nke ọgwụgwọ dysphoria nwata.